Ngokuvamile, uyakwazi ukubona izikhangiso ejenti zokwelapha, njengabo isiraphu "Dzhoset" izingane. Uphenyo kodokotela neziguli ukukhombisa umphumela okusezingeni eliphezulu zokwelapha zalesi izidakamizwa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa seziguli ezisencane, kodwa futhi abadala. Yini ithuluzi eliphelele bese ibheka ngaphezulu.
Isiraphu "Dzhoset": incazelo
Okungenhla ejenti zokwelapha libhekisela evuselela motor umsebenzi umgudu wokuphefumula futhi Sekretolitiki.
Isiraphu "Dzhoset" izingane imfundo on isicelo ichaza njengoba izidakamizwa nge mucolytic, bronchodilator, umphumela onamandla expectorant. The main isithako we nomuthi kuyinto salbutamol.
Lesi sidakamizwa itholakala ngendlela isiraphu, orange umthunzi, esemgwaqweni endaweni flakonchike amnyama. Ngaphezu kwalokho, ikhithi eminye kuhlanganisa inkomishi wokulinganisa.
Isiraphu "Dzhoset": Ubufakazi
I-ejenti ekwelapheni ngenhla Kunconywa for ekwelapheni izifo ezifana:
ukucinana kwemithambo yomoya emaphashini;
ukukhwehlela kanye expectoration nobunzima;
isifo sofuba yamaphaphu;
Ukwakheka isiraphu "Dzhoset"
Lokhu ikhambi iqukethe salbutamol sulphate ngaphezu futhi izithako elandelayo esemqoka:
Ukusekela izithako ezingeziwe sodium propyl parahydroxybenzoate, sorbic acid, glycerol, uketshezi nekristallizuruyuschiysya sorbitol, citric acid, udayi, sodium saccharinate, sodium methyl parahydroxybenzoate.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa engena emanzini ahlanzekile.
Zokwelapha ejenti zokwelapha
"Dzhoset" (isiraphu), sibonga izingxenye zalo has a spectrum ebanzi senzo. Ikakhulukazi:
Salbutamol aqede iphinde ivimbele bronchospasm, kuvusa receptor beta-adrenergic ku bronchi. Le into ine omuhle kakhulu bronchodilator umphumela.
Bromhexine kuyahluka umphumela expectorate has umphumela antitussive. Lena ngokuyinhloko, i-ejenti mucolytic. Ngenxa esidi mucopolysaccharides depolarization nqgo lamaseli secretory mucosal bronchial kwenzeka inqubo yokunciphisa viscosity isikhwehlela. Bromhexinum ikhuthaza ukudedelwa phlegm.
Gvayfenezim kusiza ukuphungula amaphaphu ebusweni isikhwehlela. Futhi kuyasiza ukwandisa uketshezi izingxenye bronchial serous lula ukususwa isikhwehlela kanye nokunciphisa viscosity yayo. Ngaphezu kwalokho, imfuyo ngenhla oyenza bronhovy ciliary apharathasi begodu sisiza nokudluliswa ukukhwehlela abakhiqizi esigabeni elikhiqizayo.
Levomenthol kuyinto enhle kakhulu izidakamizwa spasmolytic esesikhundleni izakhiwo elwa namagciwane. Kuyinto kahle Usenza sizole futhi aqede ukucasuka we mucosa bronchial, kodwa futhi inikeza ukushukuma esithambile uketshezi we nezindlala ze- bronchi.
Iziqondiso Zokusetshenziswa isiraphu "Dzhoset"
Kubhekwe khambi izingane singathathwa kuphela ngaphansi kweso lwezokwelapha esiqinile. Udokotela esabela umthamo ngamunye ingane yakho kuncike eminyakeni yobudala bakhe:
izingane ezineminyaka engu-6 ubudala kuboniswa ethola isiraphu 5 ml ezintathu izikhathi ngosuku;
seziguli ezisencane ezineminyaka engu-6 kuya ku-12 Kunconywa ukuba asebenzise okungenani 5 ml, nobukhulu bama-10 ml ezintathu izikhathi ngosuku;
izingane ngemva kweminyaka engu-nambili ubonisa lemali izidakamizwa e 30 ml, eyamukelwa ngo izabelo ezilingeneyo kathathu ngosuku.
Kufanele kuqashelwe ukuthi isiraphu is hhayi Kunconywa ukuba baphuze isiphuzo, ube nebhalansi okusezingeni eliphezulu ane-alikhali. Kunoma ikuphi ayikwazi ukudlula umthamo ngenhla.
Isiraphu "Dzhoset": nozakwabo
Umuthi ngenhla kufakwe iqembu izidakamizwa "Asthma". analogs zako ziyizindlela labo ejenti zokwelapha endaweni nesiqondiso esinikezwe, njengoba "Aminophylline, Escom," "Crank", "Ipratropium Steri-zikaNebukhadinezari".
Ngaphezu kwalokho, "Dzhoset" isiraphu likhona iqembu "isifo samaphaphu kanye ukucinana kwemigudu yokuphefumula." analogs zayo zokwelapha lezi zifo yilezi: "Vero Ciprofloxacin" futhi "tetracycline, oleandomycin +".
Ungasebenzisa futhi ezinye izidakamizwa ekwelapheni ukukhwehlela isiraphu esikhundleni "Dzhoset". analogs zayo, kulesi simo emelelwa izindlela ezifana "Ambrobene", "Ascoril" njll
Isiraphu "Dzhoset" izingane: Izibuyekezo
On isicelo esebenzisa namuhla kukhona eziningi izimpendulo. siyinake kwasekuqaleni, edonsa ukubukwa zabantu abaye basebenzisa isiraphu "Dzhoset" izingane. Izibuyekezo kubo kubonisa ukuthi le izidakamizwa iyithuluzi elinamandla futhi kunomphumela omkhulu ekwelapheni izifo umgudu wokuphefumula. Bona wazi ukuthi inqubo yokusebenzisa banamathela imiyalelo, ngakho akukho imiphumela emibi babonakala.
Cabanga futhi namazwana ajwayelekile ezimbalwa isiraphu "Dzhoset" ukukhwehlela izingane. Abazali abaningi bathi kule izidakamizwa unikeza izingane zabanye ejenti zokwelapha kukhona analogs yalo. Kodwa ezizizwa umehluko kuphela lapho beqala ukusebenzisa "Dzhoset" (isiraphu). Bathi, elokhu eba nezikhawu zokuphelelwa ukukhwehlela ezinzima ezinganeni kwehlile, akukho ubuhlungu kuqala, ukususa phlegm, umphimbo obuhlungu wanyamalala, kwaba lula ukukhwehlela. Kepha abantwana bakwa-, ngokusobala, kakhulu bumnandi lo isiraphu. Ngakho-ke, abayona inkinga, ngisho ne azithathe yakhe ngenjabulo. Ukwelashwa nokuvikelwa ukukhwehlela in ingane ihlala cishe angu-10 izinsuku. izimpawu yakhe zinyamalale ngokuphelele. abazali Ngenelisekile zithi izingane zabo ngisho imithi elwa namagciwane kungasizi njengoba isiraphu.
Kukhona iqembu labantu abasebenzisa isiraphu "Dzhoset" izingane, okuyinto Izibuyekezo baxwayiswa ukusebenzisa ithuluzi udokotela ingagadiwe. Iqiniso lokuthi izidakamizwa wathi kunomphumela oqinile, ngakho udinga ukuthola umthamo esifanele ngamunye umzimba ngamanye ingane. Kungenjalo, ungase ube ahlukahlukene ezingemnandi engemihle. Phela, self, ikakhulukazi izingane, kuyingozi futhi akazuzi impilo.
Njengoba for izindleko zomuthi, kwamukeleka ngempela kwi isiraphu "Dzhoset". Intengo umuthi ruble 450. Kuye ekhemisi nasesifundeni kungaba kancane kancane noma ngaphezudlwana.
Kufinyeta okwashiwo abantu owanika izidakamizwa ukuze izingane zabo, kungashiwo ukuthi, ngokombono wabo, kuba ikhambi esihle ngokumelene izifo zemigudu yokuphefumula, kuhlanganise ukukhwehlela etymology ezahlukene. Ngakho-ke, abazali abaningi batusa ubani ukusebenzisa isiraphu "Dzhoset". wentengo ayibizi futhi sifaneleka ngokuphelele.
Kwezinye izimo, kusetshenziswe ngokuqapha okukhulu isiraphu ezibalulekile "Dzhoset" izingane. ochwepheshe lezivakashi zisikisela ukuthi Izimo ezilandelayo ukuze ukusetshenziswa eshiwo ngenhla ejenti zokwelapha:
ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile;
sikashukela decompensated mellitus;
ukopha kakhulu esiswini;
stenosis yomthambo i-aorta;
acute isifo so-renal;
izinkinga isibindi ezinzima;
exacerbation of peptic isilonda isifo.
Ngenxa yalokho, isiraphu ukweqisa izidakamizwa bangezwa miphumela elandelayo uhlangothi izingane:
ushintsho umbala umchamo (uphendulela pink);
spasm bronchial imithambo;
Uma kukhona izimpawu okungenhla side effects kuyinto esiphuthumayo ukukhombisa udokotela wengane.
Isiraphu "Dzhoset" - umenzeli ngempumelelo ezakhelwe ekwelapheni izifo zemigudu yokuphefumula nesifo ezinganeni. Umuthi lungumbulali, udokotela zingagadiwe ngakho ukunikeza iziguli zakhe abasha is hhayi Kunconywa.
Konke mayelana ifilimu "Ice Inkosazana": abalingisi, izindima, sakhiwo